स्वास्थ्य-जीवनशैली - माडी खबर
access_time ५ कार्तिक २०७८, 12:35 am
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनको बेला हुने संक्रमणले मानिसहरू अनेक खालका मौसमी रोगबाट पीडित छन् । यस्तोमा राम्रोसँग तरकारीमा ज्वानोको प्रयोग गर्ने हो भने या औषधीकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो जीवन स्वस्थ्य रहनेछ…
access_time २० असोज २०७८, 11:33 pm
मी सबै आफ्नो कपाल सुन्दर, कमलो र चमकदार होस् भन्ने चाहन्छौं । कपाल धेरै नझरोस् र जस्तो स्टाइल पार्न पनि मिलोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुन्छ । आजकलका विज्ञापनले पनि यो चाहनालाई लक्षित गरिरहेका हुन्छन्…
access_time २० असोज २०७८, 12:12 am
काठमाडौं । भनिन्छ, हरेक व्यक्तिको नीजि जीवन ओछ्यान मै विकसित हुन्छ। ओछ्यानलाई आकर्षक, लोभलाग्दो तथा विशेष बनाउनका लागि थोरै कुराहरुमा ध्यान दिए पुग्छ। ओछ्यानमा हरेक व्यक्तिले जीवनको करिब एक तिहाइ समय बिताउने भएकाले पनि यो…
access_time १९ असोज २०७८, 2:23 am
के तपाईको पार्टनर तपाईसँग खुलेर कुरा गर्दैनन् ? के उनको नजरले अब तपाईको खोजी गर्दैन ? के तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि अब उनी तपाईलाई नजरअन्दाज गर्दैछन् वा तपाईसँग बच्न चाहन्छन् ? हुनसक्छ कि तपाईको पार्टनर…